RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay barbaraha ku kala tageen kooxaha Man City iyo Liverpool ee Premier League - Gool FM	twitter
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay barbaraha ku kala tageen kooxaha Man City iyo Liverpool ee Premier League
(Manchester) 20 Maarso 2016 – Kooxaha Manchester City iyo Liverpool ayaa isku garab dhacay kulan ka tirsan Premier League oo ka dhacay Etihad Stadium.
Muwaadiniinta kooxda lagu naanayso ee Man City oo soo dhaweysay wiilasha Klopp ayaa ku sigtay in laga badiyo, kaddib markii uu daqiiqadii 52-aad gool ku laad ugu shubay James Milner.
Hase ahaatee, waxaa badbaadiyey dhinaca tababare Pep Guardiola Sergio Kun Aguero oo shabaqa dhex dhigay daqiiqadii 69’aad baas dhow oo uu ka helay Kevin de Bruyne.
>- Man City ayaa ku guuldarreysatay inay shabaqeeda gool ka ilaashato dhammaan sagaalkii kulan ee Premier League ay la ciyaartay todobada kooxood ee ugu sarreeya xilli ciyaareedkan.
>- Sergio Kun Aguero ayaa gool dhaliyey mid kasta oo ka mid ah shantii kulan ee uu horyaalka Premier League garoonka Etihad kula dheelay Liverpool.
>- Liverpool ayaa heshay 20 dhibcood 10 kulan oo ay la ciyaartay lixda kooxood ee ugu sarreysa xilli ciyaareedkan, laakiin 19 dhibcood ayey ka heshay 10 kulan oo ay wajahday lixda kooxood ee ugu hooseeya.
>- Milner ayaa hadda haysata RIKOODH ah inaan laga adkaan kulan Premier League oo isagu uu gool dhaliyey, marnaba guuldarro lama kulmin kulan horyaalka ah oo uu kooxdiisa gool u dhaliyey muddo 47 kulan (37 kulan marka uu gool u dhaliyo horyaalka Ingiriiska kooxdiisu waa ay guuleysatay halka ay barbaro gashay 10 kulan, marnaba lagama adkaan).
Milner ayaa hadda dhaliyey 7 gool ku laad horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, kaliya S.Gerrard oo xilli ciyaareedkii 2013-14 dhaliyey 10 rigoore ayaa kaga badan marka la eeg gool ku laadyada Liverpool loogu dhaliyey ololaha Premier League.